Munaasabad lagu taageeray waxqabadka Turkiga oo Muqdisho lagu Qabtay |
Munaasabad lagu taageeray waxqabadka Turkiga oo Muqdisho lagu Qabtay
Revatio online, generic lioresal. Munaasabadaan lagu taageerayay dowladda Turkiga iyo waxqabadkeeda Somalia ayaa xalay lagu qabtay Muqdisho, taasoo ay ka qayb-galeen mas’uuliyiin ka tirsan labada dowladda, safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga, xubno ka socday hay’adaha samafalka Turkiga iyo bulshada qaybaheeda kala duwan.
Maamulka gobolka Baaadir ayaa soo qabanqaabiyay munaasabaddan iyadoo fannaaniinta Soomaaliyeed ay goobta kusoo bandhigeen suugaan kala duwan oo ka hadlaysay waxqabadka dowladda Turkiga ee Soomaaliya.
“Walaalaha Turkiga waxqabad muuqdo ayay Soomaaliya ka fuliyeen, runtii shacabka Soomaaliyeed ma illoobi doonaan abaalka ay u galeen walaalaha Turkiga,” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen (Muun-gaab).
Sidoo kale, guddoomiye ku-xigeenka hay’adda bisha cas ee Turkiga, Nihat Adiguzel oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inay sii wadayaan taageerada ay u fidinayaan shacabka Soomaaliyeed, taasoo qayb weyn ka ah xoojinta xiriirka labada dal.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya ee xilka sii haya, C/llaahi Goodax Barre ayaa sheegay in booqashada madaxweynaha Turkiga uu ku yimid Muqdisho ay tahay mid taariikhi ah oo ka turjumeysa xiriirka walaalnimo ee labada dal ka dhexeeya.
“Waxaan jeclahay inaan aad uga mahadceliyo guddoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho oo xafladdan soo qaban-qaabiyay, tan kale maanta waxaa u qormay Soomaaliya iyo Turkiga taariikh kale oo hor leh. Walaalaha Turkiga wax badan ayay noo qabteen, waana u mahad-celineynaa” ayuu hadalkiisa ku daray Goodax.
Si kastaba ha ahaatee, booqashada madaxweynaha Turkiga uu shalay ku yimid Muqdisho ayaa ahayd tii labaad oo uu dalka ku yimaado iyo tii ugu horreysay oo isagoo madaxweyne ah uu ku yimaado Soomaaliya, isagoo ballanqaaday mashaariic hor leh